Vaovao - Tombontsoa azo avy amin'ny lovia plastika azo ampiasaina
Ny trano fisakafoanana rehetra sy ny trano fisakafoanana haingana any an-tsena dia mampiasa kaopy plastika azo esorina, satria ny fampiasana kaopy plastika fanary dia mety sy hadio.
Eritrereto fotsiny izany, misy fisakafoanana marobe ao amin'ny trano fisakafoanana isan'andro, saingy vitsy ny olona ao amin'ny trano fisakafoanana. Ahoana no ahafahan'izy ireo manana fotoana be dia be hanasana tsirairay ny takelaka latabatra, afa-tsy ny famonoana azy tsirairay? Raha tsy voan'ny otrikaretina avo ny bakteria mamindra dia tsy azo vonoina mihitsy. Raha tsy mihaino izy ireo dia ho voan'ny virus, ary tsy fantany.
Noho izany, ny kaopy plastika fanary dia nanjary solon'ny latabatra amina trano fisakafoanana maro. Ireo vokatra azo ariana, aza ampiasaina indray, dia afaka mamono amin'ny fomba mahomby ny areti-mifindra amin'ny areti-mifindra amin'ny alàlan'ny latabatra maloto, misoroka ny vava amin'ny vava! Ao amin'ny fiarahamonina ankehitriny, nanjary latabatra plastika azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo haingana, ary ankasitrahan'ny tanora ihany koa izy io.
Satria mety sy haingana izy io, dia afaka manafoana otrikaretina bakteria sy mikraoba maro ateraky ny fanadiovana tsy ilaina ny latabatra. Izy io koa dia misoroka ny fahasahiranana ateraky ny milina fanaovana latabatra famonoana desinfection. Fanary, mety ary hadio fitondran-tena. Halaviro ireo vokatra marobe tsy voamarina novokarin'ny mpanamboatra tsy mendrika. Safidio ny kaopy plastika azo atsipy, vilia plastika azo esorina, kaopy plastika azo esorina ary mololo vokarin'ny mpamokatra mahazatra. Ankehitriny dia fampiroboroboana haingam-pandeha, vanim-potoana haingana, ka plastika azo esorina.
Ny fampandrosoana ny indostrian'ny fikarakarana sakafo dia lehibe.
Mahasalama sy tia tontolo iainana ve ny boaty fisakafoanana PP azo esorina?
Voalohany indrindra, ny tena plastika PP mihitsy dia fitaovana ara-pahasalamana sy sariaka. PP dia karazana plastika, polypropylene no anarana siantifika. Izy io dia karazana polymer linear misy hakitroka avo, tsy misy rojo sisiny ary kristaly avo lenta.
Ny PP dia manana fananana tsara toy ny fanoherana mitsonika, fanoherana ny menaka, fanoherana asidra malemy, fanoherana alkali malemy, fanoherana avo lenta ary fahafaha-miala sasatra amin'ny fihenjanana, fanoherana tsara anaovan-tena, fanosorana tena, fanoherana ny havizanana sns. Raha tsy misy poizina ny kapoaka vita amin'ny polypropylene, ny mari-pana fanodinana (℃) dia 180 ~ 240. Ka rano mangotraka, ny hafanan'ny mari-pana dia tsy hanimba azy.
Araka ny fanadihadiana, ireo antsoina hoe boaty fisakafoanana plastika PP plastika eny an-tsena dia tsy fitaovana PP avokoa. Niditra tao amin'ny fivarotana boaty fisakafoanana plastika ilay mpanao gazety ary nahita ny karazana boaty fisakafoanana PP. Taorian'ny fanadihadiana dia hitany fa misy banga be eo amin'ny vidiny. Rehefa avy nanadihady ny antony ny lehibeny dia nanome fanazavana toy izao: "voalohany, hafa ny mpanamboatra, ary ny vidin'ny marika tsy mitovy amin'ny an'ny marika. Ankoatr'izay, ny boaty fisakafoanana sasany voasoratra miaraka amin'ny fitaovan'ny PP dia tsy fitaovana PP, na ny fitaovana dia PP, ary ny sasany mampiasa PS na PP PVC dia ampiasaina amin'ny faritra sasany, ka ho hafa ny vidiny. "Nilaza koa ny sefo fa raha mampiasa azy ianao dia afaka misafidy marika misy marika feno. Mazava ho azy fa avo kokoa ihany koa ny vidiny.
Manoloana ny kalitaon'ny boaty fisakafoanana PP azo atsipy, namintina torohevitra vitsivitsy hanavahana azy ireo. Voalohany indrindra, ny fitaovana dia azo tsaraina amin'ny fahatsapana sasany, toy ny hoe misy fofona hafahafa rehefa maimbo, ary na malama sy henjana ny tahony rehefa mikasika. Ny boaty fisakafoanana tena lafatra PP dia malama, henjana ary tsy misy fofona. Raha misy "fofona plastika" miharihary ary malefaka dia malefaka dia tsy tokony hampiasaina.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ny afo misokatra amin'ny fandoroana materialy, misy vovoka mainty toy ny PVC na PS, ary ny PP kosa tsy.
Ary farany, raha tena tsy hainao ny manavaka, ny fomba mivantana indrindra dia ny misafidy boaty fisakafoanana marika be fanina misy logo feno. Misy telozoro mivadika eo ambanin'ny boaty fisakafoanana, izay hamariparitra tsara ireo fitaovana fanamboarana.
Mino aho fa miaraka amin'ireto torohevitra ireto, rehefa mampiasa boaty fisakafoanana azo ampiasaina dia afaka mandinika bebe kokoa ianao hisafidy boaty fisakafoanana PP azo ampiasaina ara-pahasalamana sy sariaka.